Ahoana no hiampitana ny sisin-tanin'i Tijuana?
Etazonia California San Diego
Mandeha ny sisin-tanin'i Etazonia-Meksika mankany Tijuana
Ahoana ny fandehanana any Tijuana avy any San Diego
Zebra-striped Donkey tany Tijuana. © 2006 Betsy Malloy Photography. Nampiasaina tamin'ny Fahazoandàlana.
Ny fitsaràna ny sisin-tanin'i Etazonia-Meksika hitsidika an'i Tijuana dia tsy voatery ho traikefa amin'ny lahatsarin'ny Worst Travel Blunders.
Raha ny marina dia mora ny maty raha mahafantatra zavatra vitsivitsy alohan'ny handehananao sy haka ny zavatra tsara miaraka aminao.
Ireo torolàlana maningana ireo dia mampiseho anao ny fomba hiampitana ny sisin-tanin'i Etazonia / Meksika ao San Ysidro.
Manana safidy roa eo amin'ny sisin'ny sisin-tany ianao ary izay tokony hofidiana dia miankina amin'ny fomba hidiranao any amin'ny sisintany. Ireo safidy dia aseho etsy ambany.
Misy koa fiampitana Tijuana hafa any Otay Mesa, saingy tsy akaiky ny toerana ao Tijuana izay tianao ho tonga mpitsidika.
Raha mandeha haingana ianao, tokony ho fantatrao fa ny fotoana andrasan'ny sisin-tany dia tsy mihoatra ny roa minitra ka hatramin'ny adiny roa mahery, ary tsy misy fomba azo haminavinana ny halavan'ny fotoana. Ny Customs and Border Patrol dia manana fampiharana andrasana izay mety hanampy anao hisafidy izay fiampitàna hitondra.
Miomàna. Alohan'ny handehananao manatrika ny sisin-tany, aoka ho azo antoka fa manana famantarana miaraka aminao ianao.
Tany aloha, afaka miditra Meksika avy any Etazonia tsy misy antontan-taratasy ianao, saingy amin'izao fotoana izao, Meksika dia mitaky ny mpitsidika rehetra mba hampiseho pasipaoro fanoratana boky rehefa miditra ny fireneny. Hangataka anao koa ianao hameno fahazoan-dalana hizara. Azonao atao ny mahita torohevitra vitsivitsy hanaovana izany etsy ambany.
Mila pasipaoro foana ny olom-pirenena amerikana ary tsy fahazoan-dàlana na fahazoan-dàlana hamerenana indray ny US, na dia tsy nampiharina hatramin'izao aza ny fitsipika. Jereo ny fepetra misy ankehitriny ao amin'ny tranonkalan'ny Departemantam-panjakana.
Torohevitra amin'ny famenoana ny fahazoan-dàlana ho an'ny fizahantany
Ny mpitsidika rehetra any Meksika dia tsy maintsy mameno ny fahazoan-dàlana hizara. Torohevitra sasantsasany dia hanampy anao hanao izany tsy misy ahiahy:
Fenoy ny ampahany ambony sy ambany amin'ny endrika, na dia misy ny fampahalalana sasantsasany aza miseho indroa.
Ny sora-baventy kely dia mahatonga azy io tsy ho vitanao mihitsy, fa ny daty nahaterahanao (efajoro 4) sy ny daty misy anao dia tokony hiditra ao amin'ny format DAY-MONTH-YEAR
Raha mandehandeha eny amin'ny sisintany ianao dia avelao boaty 11 ary tsy misy.
Ao amin'ny boaty 13, midira ao amin'ny Tijuana
Raha manao dia an-tongotra ianao, dia mialà sasan-tsasatra 14.
Mankany amin'ny sisin-dalana amin'ny Automobile
Fidirana PedWest mankany Meksika. shakzu / Getty Images
Mety handeha any amin'ny firenena hafa ianao rehefa mitsidika an'i Tijuana, saingy tsy handeha lavitra an'i San Diego ianao. Raha ny marina dia 15 kilaometatra monja avy eo afovoan-tanàna San Diego mankany amin'ny sisin-tany. Raha mikasa amin'ny alàlan'ny fiara ianao mankany Meksika, dia mora kokoa ny mampiasa ny fiampitan'ny Pedwest izay mpandeha an-tongotra - tsy misy afa-tsy fiara mivezivezy eny akaiky eny.
Ny Pedwest dia misokatra amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 10 hariva noho ny mandeha any atsimo mankany Tijuana ary 24 ora isan'andro handehanana any avaratr'i Etazonia
Mitondra mankany Pedwest
Ny Pedwest dia any amin'ny 499 Virginia Ave. San Ysidro CA. Farany dia hahita ny toeram-piantsonana fiambenana sisin-tany amin'ny 4570 Camino de La Plaza. Ny loka dia voafafa, tsara tarehy ary nanatrika 24 ora isan'andro. Na izany aza, indraindray dia mameno izay mety hamela anao hikororohana mba hahita toerana hafa hijanonoana. Mba hisorohana an'izany, mitandrema amin'ny toerana fijanonana amin'ny parking amin'ny alalan'ny SpotHero. Ny mpiasa ao amin'ny sara dia tsy voambara tsara momba izany, koa aoka ho vonona ny hampiseho amin'ny mpikarakara fa tsy ny fanamafisana fotsiny fa koa ny tapakila izay ahitana ny habetsaky ny vola azonao.
Ridesharing Services ho an'ny mpanolo-tena
Raha mampiasa serivisy fanatanjahan-tena handeha ho any Pedwest ianao, ampiasao ny adiresy etsy ambony ary aza avela ny mpamaky hiteny aminao fa tokony handeha any amin'ny fiarandalamby ianao. Tsy ny fotoana fiandrasana fotsiny matetika no matetika any Pedwest, fa ny faritra tsy misy fialan-tsasatra ihany koa.
Rehefa mandalo ny fifindra-monina ianao, dia handeha midina lava lava be dia be izay mankany amin'ny arabe. Mandehana manerana ny toeram-piantsonana ary miampita ny arabe, mivezivezy mankany amin'ny foibe fivarotana madinika sy tetezana mpandeha an-tongotra mba hiditra amin'ny làlana eny ambany.
Tonga eo amin'ny sisin-tany amin'ny San Diego Trolley
Mandehana ho any amin'ny sisin'ny Tijuana. Betsy Malloy Photography
Raha mandray ny San Diego Trolley mankany amin'ny sisin-tanin'i Etazonia / Meksika ianao, dia afaka mandeha eny amin'ny sisin-tany manomboka amin'ny fiarandalamby farany. Hamarino ny dingana arahina amin'ny lalana ho an'ny San Diego Trolley .
Ity sary ity dia mampiseho ny toerana nahatongavan'ny San Diego Trolley. Mivily mialoha ny sisin-tany, fa handeha hidina kely ianao hiditra ao.
Ankoatra ny arofanina trolley dia fivarotana vitsivitsy sy McDonald iray izay toerana tsara hanaovana fijanonana haingana fivoahana alohan'ny hivezivezena. Izy ireo dia mitaky haba kely hampiasa ny trano.
Raha vonona ny handeha any Tijuana ianao, mandehana manatrika ilay trano manga hita amin'ity sary ity. Raha toa ianao ka manahy momba ny fiomanana, andramo indray ny fotoana handaniana ny pasipaoronao. Jereo ny etsy ambony.
Vao haingana teo io trano manga io dia hahita famantarana famantarana manondro ny sisintany ianao. Araho ny mari-pamantarana ary araho ny fiatoana.
Rehefa mandalo eo ambanin'ny famantarana izay milaza "Mexico" ianao, dia mora ny manao izany. Miezaha fotsiny mandeha. Sarotra ny tsy ho very.
Hiditra amin'ny trano ianao ary handeha eo ambany lalana. Ny Departemantan'ny fifindra-monina Meksikana dia manana toeram-pisavana ao amin'ny trano izay hanamarinany ny pasipaoronao. Azony atao ihany koa ny mandefa anao amin'ny visa arakaraka ny halavan'ny fotoana hijanonanao.
Amin'ny farany dia hivoaka eny an-dàlana ianao. Izany no mahatonga ny zava-mitranga kely kokoa, fa aza manahy. Tohizo fotsiny ny famakiana hahafantarana izay tokony hatao.
Mandehana mankany San Ysidro mankany amin'ny Revolucion Avenue.
Raha mankany Tijuana afovoan-tanàna ianao, ny sari-tany etsy ambony dia mampiseho ny lalana avy any amin'ny sisintany izay tsy dia misy dikany loatra amin'ny sisin-tany misy anao. Tsy dia ampy antsipirihany loatra ny manampy ny habeny, fa azonao atao kosa ny mijery ilay lehibe kokoa.
Amin'ny teny, izao no tokony hatao:
Rehefa avy nandalo ny lalana nivezivezena sy ivelany ianao, dia mitadiava fifandimbiasana avo be eny amin'ny arabe. Tena akaiky izany ary ho eo ankavananao izany.
Ampiasao ny fivakisana mba hahatongavana eny ampitan'ny lalana. Eo amin'ny faran'ny fiampitana mivezivezy, mandehana mitety an'i Avenida de la Amistad.
Raha te-haka taxi ianao, dia tsy miraharaha ireo mavomavo izay hitanao aloha. Tsy ara-dalàna izy ireo ary matetika mamitaka anao - na ratsy kokoa. Miezaha kosa mandeha mitady finday Taxi-blan fotsy ary manara-penitra. Mandehana mankany Avenida de la Amistad ary mitadiava iray.
Mandehana mankany amin'ny Tijuana River Bridge
Tijuana Bridge sy Arch. Betsy Malloy Photography
Raha mandeha ao amin'ny Avenida de la Revolucion ianao, dia mandehana mialoha avy any amin'ny Avenida de la Amistad ary tadiavo ny andohalambo an-davan'ity sary ity. Io no sanda mora indrindra hita ao Tijuana.
Mandehana mankany amin'ny andohalambo, tetezo ny tetezana Tijuana River, ary efa ho eo ianao.
Avadiho ny Avenida Negrete. Betsy Malloy Photography
Avy amin'ny Avenida Negrete, sehatra roa fotsiny ho an'ny Avenida Revolucion. Mandehana avy hatrany amin'ny andohalambo.
Ny Tijuana Arch. Dan Cipolla / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0
Mivilia havanana raha tonga eo amin'ny andohalambo lehibe eto amin'ity sary ity, ary ianao dia ao amin'ny Avenida Revolucion, lalam-ben'ny tanàna. Tsarovy ny eritreritrao. Ny mari-pamantarana hiverina any raha very, na rehefa vonona ny hody ianao.
Mba hahafantarana misimisy kokoa momba izay azonao atao any Tijuana - ary ny antony mahatonga ny fitsangatsanganana ataonao tsy mety ho ny fomba tsara indrindra hahitana izany, jereo ny Tijuana Visitor Guide .
San Diego - Zavatra atao hatao maimaim-poana
Ny fomba hahatongavana ho mpizahatany San Diego
Downtown San Diego sary
Ny toerana tsara indrindra fitsidihana ny andro sy ny manodidina an'i San Diego County
Zavatra atao hatao mandritra ny andro iray na ny faran'ny herinandro ao Cambria
Gasparilla Pirate Fest: 28 Janoary 2017
Ny tranonkala sy Apps indrindra tsara indrindra
Toeram-pisakafoanana Japoney lehibe tany Charlotte
Grand Canyon, Flagstaff & Monument Valley Gay Guide
5 Ny orinasa miasa amin'ny fanaovana raharaham-barotra dia miteraka zava-misy
Biltmore Estate - Zava-mahadomelina folo mandritra ny fitsidihanao
L'Eclaireur Concept Shop ao Paris
Bike Events 2017 any Washington DC
Splash Bay Indoor Water Resort ao amin'ny Holiday Inn Toledo
Luxor sy Ancient Thebes: The Complete Guide
Mpilatsaka an-tsitrapo amin'ity vanim-potoana ity
Ampiasao ny tranonkala iray misimisy avy amin'ny Plan Planner na ny App amin'ny Travel Budget
Fialan-tsasatra herinandro: Carmel-by-the-Sea, Californie